US ịkwụsị inye ụmụ amaala visa nke Cambodia, Eritrea, Guinea na Sierra Leone
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » US ịkwụsị inye ụmụ amaala visa nke Cambodia, Eritrea, Guinea na Sierra Leone
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Kambodia • Akụkọ na -agbasa na Eritrea • Akụkọ na -agbasa na Guinea • News • Akụkọ Sierra Leone • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ngalaba US State Department kwuru na ha ga-akwụsị ịnye ụfọdụ ụdị visa maka ụmụ amaala nke Cambodia, Eritrea, Guinea na Sierra Leone, n'ihi na ha jụrụ iweghachi ụmụ amaala a chụpụrụ azụ.
Edere iwu ọhụrụ ahụ na eriri nke Ngalaba Ọchịchị site n'aka odeakwụkwọ nke State Rex Tillerson na Tuesday. Onye na-ekwuchitere onye na-ekwuchitere Ngalaba na-ahụ maka Ọchịchị na steeti bụ Heather Nauert gosipụtara na agbanyela mmachibido iwu na mba anọ niile dị na Wenesde, dị ka AP si kwuo.
Ndị ọrụ US tụlere mmachi ndị a n'ọnwa gara aga, mgbe Ngalaba Na-ahụ Maka Nchebe Obodo tụrụ aro ka Ngalaba Steeti mee ihe megide mba anọ ahụ maka ịjụ ịkwado amụma iwu mbata na mbata nke Trump.
Na nkwupụta ya banyere mmachi akwụkwọ ikike visa, DHS kwuru na mba anọ ahụ enweghị ntụkwasị obi na iwepụta akwụkwọ njem maka ụmụ amaala ha. N'ihi nke a, “A manyere ICE ịtọhapụ ihe ruru mmadụ 2,137 ndị Guinea na ndị 831 Sierra Leone na United States, ọtụtụ ndị nwere ikpe mpụ.”
DHS kwuru na enwere ihe dị ka ndị mba Eritrea 700 bi na US na iwu mwepụ ikpeazụ. Ihe karịrị ndị mba Cambodia 1,900 nọ n'okpuru iwu mwepụ ikpeazụ, nke 1,412 ahụ nwere ikpe mpụ.
Maka ndị Kambodia, mmachi azụmaahịa na njem nleta ga-emetụta ndị ọrụ minista mba ọzọ na ọkwa onye isi ọhaneze na nke dị elu, yana ezinụlọ ha.
Emlọ ọrụ US Embassy na Eritrea ga-akwụsị ịnye ndị amaala Eritrea visa na azụmaahịa na njem nlegharị anya, yana "ewezuga oke," ka o kwuru na nkwupụta.
Mba Guinea dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa kwuru na mmachi ọhụrụ a gbasara azụmahịa, njem nleta na visa ụmụ akwụkwọ ga-emetụta naanị ndị ọrụ gọọmentị na ndị otu ezi na ụlọ.
Onye isi ochichi nke Guinea Damantang Albert Camara gwara ndi Reuters, "Anyi nile juru ndi America ikike site na mkpebi ndi isi ochichi nke America mana onye ozi nke mba ozo na-aru oru ugbua ka onodu a laghachi n'udi."
Na Sierra Leone, mmachi na visa na njem nleta ga-emetụta ndị ozi mba ofesi na ndị ọrụ mbata na ọpụpụ.
Visas enyegogo enyereghị iwu ọhụrụ ahụ emetụta.
Enwere obodo iri na abuo ndi ozo, n'etiti ha bu China, Cuba, Vietnam, Laos, Iran, Burma, Morocco na South Sudan, ndi edeputara dika ndi na adighi anabata ndi achupuru. Iwu gọọmentị na-enye Ngalaba Ọchịchị ikike ịkwụsị ụdị visa ọ bụla ma ọ bụ nke a kapịrị aha ịnye ha mba ndị ahụ.
Ihe atụ kacha nso a bụ n'October 2016, mgbe gọọmentị Obama kwụsịrị inye ndị ọrụ gọọmentị Gambia na ndị ezinụlọ ha visa, n'ihi na gọọmentị anaghị eweghachi ndị mbupute US na Gambia.